China Umsizi Camera Fiberglass Ilaphu Ukwenziwa kunye Factory | Jiashun
Elilaphu iglasi ifayibha camera camera grafayithi unako ukusebenza 700 ℃. Grafayithi wawutyabeka iglasi ifayibha ngelaphu uye kakhulu ukuxhathisa ukukhuhlana kunye nokumelana imichiza. Ngoko ke, grafayithi wawutyabeka ngelaphu iglasi ifayibha ilaphu idla ngokusetyenziswa ngqongqo umhlwa umchiza, acid kunye nokumelana kwealkali okanye indawo ubushushu eliphezulu.
Isetyenziselwa ukutywina kunye nokukhuselwa kobushushu obuphezulu.
Njengendlela yokusebenzisa oovimba kulwazi olwandisayo kurhwebo lwamanye amazwe, samkela amathemba avela kuyo yonke indawo kwiwebhu nangaphandle kweintanethi. Ngaphandle kwezinto ezikumgangatho ophezulu esizinikezelayo, inkonzo yokubonisana esebenzayo kunye neyanelisayo inikezelwa liqela lethu elifanelekileyo emva kwenkonzo yentengiso. Uluhlu lwezinto kunye neeparameter ezineenkcukacha kunye nolunye ulwazi oluya kuthi luthunyelwe kuwe ngexesha elifanelekileyo lemibuzo. Ke nceda unxibelelane nathi ngokusithumela ii-imeyile okanye usitsalele umnxeba xa unemibuzo malunga nombutho wethu. unokufumana ulwazi lweedilesi zethu kwindawo yethu kwaye uze kumashishini ethu. Sifumana uvavanyo lwentsimi kwintengiso yethu. Siqinisekile ukuba sizokwabelana ngokufezekisa kunye kwaye sidale ubudlelwane obuluqilima kunye namaqabane ethu kule ndawo yentengiso. Sifuna phambili imibuzo yakho.
Ziyimodeli ehlala ihleli kwaye zikhuthaza ngokufanelekileyo kwihlabathi liphela. Ngaphantsi kwazo naziphi na iimeko ukunyamalala kwemisebenzi ephambili ngexesha elikhawulezayo, kufanelekile kuwe kukumgangatho olungileyo. Ukukhokelwa ngumgaqo "wobulumko, ukusebenza ngokukuko, uManyano kunye nokuQamba. Inkampani yenza iinzame ezimbi zokwandisa urhwebo lwayo lwamanye amazwe, inyuse inzuzo yenkampani yayo kwaye inyuse isikali sayo sokuthumela ngaphandle. Siqinisekile ukuba siza kuba nethemba eliqaqambileyo kwaye ukuba isasazwe kwihlabathi liphela kwiminyaka ezayo.
Egqithileyo Ilaphu le-vermiculite camera
Okulandelayo: Ingubo yokufaka iwelding ye-fiberglass